Playa Arenal beach, Playa Arenal Beach - Chile
Amerika Atsimo Shily
Adiresy: Villeparaiso, manodidina. Robinson Crusoe, Chilie;
Fotoana misokatra: 24 ora.
Eo ambanin'ny anarana hoe Beach Playa ( Shily ) dia matetika midika hoe Arenal, satria amin'ny teny Espaniôla (fiteny ofisialy ao amin'ny firenena) Playa na Playa - tsy misy toy ny tora-pasika.
Inona no mitovy amin'izany?
Tsy ny tanibe ihany no i Shily, fa ireo nosy maro koa - Paka , Robinson Crusoe , Horn ary ny hafa. Ny lapa Playa Arenal dia miorina amin'ny iray amin'izy ireo - ao amin'ny nosy Robinson Crusoe. Ireto misy toetr'andro mediteraneana miaraka amin'ny mari-pana-tsela avy any +3 hatramin'ny 30 ° C. Ny zavamaniry sy ny zavamaniry ao amin'ilay nosy dia tsy manan-karena loatra, noho izany, ireo mpandeha izay tia ny fialana amin'ny sivilizasiona dia manana zavatra atao eto.
Vitsy ny mponina ao an-toerana - eo amin'ny arivo monja. Izy ireo dia manintona ireo aviavy ary manandrana manampy ireo mpizaha tany amin'ny zavatra rehetra. Ny farany amin'ny fepetra ankamantatra dia mankany amin'ny nosy Robinson Crusoe.
Playa Arenal no hany lobaka amoron-dranomasina eto amin'ity faritra ity. Misy tsipika amoron-dranomasina marobe, ka maro ny toerana tokony hialana. Raha mampifangaro ny rano azon'i Pasifika ianao, ny fasika malefaka malefaka, ny masoandro mamirapiratra sy ny toerana tsara tarehy, dia mahazo ny sary tonga lafatra ianao. Saingy tsy mora izany.
Ny indostrian'ny fizahan-tany ao amin'ny nosy dia saika tsy mivoatra. Tsy ampy ny toerana ahafahana miala sasatra - misy trano fandraisam-bahiny fa tsy misy kintana mihitsy aza. Ho an'ny tanibe manodidina ny 600 km, ary amin'ny rano ihany. Mena ny ranomasimbe, ny toetrandro amin'ny ankapobeny dia tsy mety amin'ny fialan-tsasatry ny torapasika. Tsy misy ny fomba fijery, ankoatra izay, ny mponina dia miaina amim-pahitsiana, noho izany dia mety tsy ho afaka mandeha na hipetraka any amin'ny toerana iray ao amin'ny café ianao.
Hitanao fa ny mankany an-tsambo eto dia ny mahita ny tora-pasika sy mitsambikina any anaty rano malemy dia tsy azo tsinontsinoavina, ary mijanona eto mandritra ny herinandro vitsivitsy izay tsy tiany ny rehetra.
Na dia izany aza, ho an'ireo mpizaha tany tia mianatra izao tontolo izao, ary tsy mipetraka amin'ny toetran'ny fiainana mahazatra - ity toerana ity dia tsara ho an'ny fandinihana sy fialam-boly. Ny alahelony indrindra dia manintona ny mahita ilay mpandositra alemana anglisy "Dresden" (Ady Lehibe I).
Avy any an-drenivohitr'i Chili fotsiny amin'ny rano. Ao amin'ny nosy ihany, làlam-barotra amin'ny 3% henjana, ny sisa dia tsy voavonjy, ary izany dia tsy eny rehetra eny. Misy seranam-piaramanidina bitika kely eo amin'ilay nosy. Afaka misidina fiaramanidina maivana ihany izy. Ny faharetan'ny fiaramanidina misy fiantraikan'ny toetr'andro, izay midika fa indraindray ianao dia afaka miandry herinandro ho an'ny fialan-tsasatra, mandra-pitombenan'ny toetr'andro. Ny fomba hahatongavana any amin'ny seranam-piaramanidina mankany amin'ny toeram-ponenana sy ny fialan-tsasatra, manapa-kevitra ny tenany tsirairay, satria tsy misy lalana, eny fa na dia ny tany aza.
Ny lalan'i Magellan
Nahavo Huapi National Park
Ny Lohasahan'i Lunar (Shily)
Famoronana - soritr'aretina
Kitapo fanorenana ao amin'ny efitra fandroana
Bibikely maniry: varieties
Ahoana ny famindrana ny ficus?
Objects of tea service
39 herinandro ny bevohoka - ahoana no hampitombo ny fiterahana?
Mihoatra noho ny fomba amam-panao ny lozaka amin'ny caterpillars?